Jahawareer ka taagan sida ay u shaqeeyaan labada aqal ee Baarlamanka DF Somalia (2 hindise oo lasoo jeediyey) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Jahawareer ka taagan sida ay u shaqeeyaan labada aqal ee Baarlamanka DF...
Jahawareer ka taagan sida ay u shaqeeyaan labada aqal ee Baarlamanka DF Somalia (2 hindise oo lasoo jeediyey)
(Hadalsame) 01 Okt 2021 – Haddaad maqasho “sare” waxaa xaqiiqo ah hoosena inuu jiro. “Baarlamaan” waxaa afka Soomaaliga lagu yiraahdaa “Golaha Shacabka”, khaladaadka ku jira Dastuurka wey badan yihiin, kuwa udub dhexaadka ah ee ku jira waxaa ka mid ah “dastuurka oo aqoonsan Baarlamaanka inuu ka kooban yahay 2 aqal, ayaa labadii aqal midna la yiri waa Aqalka Sare ee Baarlamaanka”, halka kii kalena intii la oran lahaa “Aqalka Hoose ee Baarlamaanka” la yiri waa “Golaha Shacabka”.
Wey jirtaa inuusan Aqal Sare jirin xilligii la diyaarinaayay dastuurka qabyada ah, sidoo kalana ma eysan dhicin iney labada aqal isu yimaadaan oo ay ayagoo hal baarlamaan ah saxaan khaladaadka jira ee ayaga caqabadda ku ah, taasina wexey keentay iney labadii aqal kala miisaan weynaadaan oo ay awoodii baarlamaanka dhamaanteed aado Aqalkii Hoose ee Baarlamaanka.
Marka ay labada aqal isu yimaadaan waxaa la yiri waxaa shirka guddoominaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo loola jeedo Guddoomiyaha Aqalka Hoose.
Dunida waxaa marka koowaad la doortaa cidda qabaneysa xilka ugu sarreeya, sida madaxweyne marka uu jiro ku xigeen.
Waxaa la yaab leh in Soomaaliya la doorto ugu horreyn xubnaha Aqalka Sare ayaguna ay doortaan Guddoomiye iyo ku xigeenno, kaddibna la doorto aqalka hoose ayaguna ay doortaan ku xigeenno, kaddibna uu madaxweynaha xilliga doorashada noqdo guddoomiyihii gadaal laga doortay ayadoo uu joogo guddoomiye ka horreeyay ee la doortay.
Waxaa ayadana khalad ah in Aqalka Hoose loo xilsaaro kalsooni siinta iyo kala noqoshada xukuumadda ayadoo aan waxba laga weydiineyn Aqalka Sare oo uu kala mid yahay Shacabka daawanaya. Waxaa weliba intaa dheer in xubnaha Aqalka Hoose loo oggol yahay iney ka mid noqdaan xukuumaddii la yiri adinka ayaa kalsoonida siin kara ama kala noqon kara, taasoo sida uu caalamka isku waafaqsan yahay ah “ka daneysi” ama “conflict of interest”.
Waxaan Qoraalkan ku soo gabagabeynayaa
1) Guddoomiyaha Aqalka Sare inuu sharciyan leeyahay mudnaanta koowaad ee ah in uu noqdo madaxweynaha xilliga doorashada, maadaama uu yahay mas’uulka koowaad ee la doorto.
2) In Aqalka Hoose laga joojiyo ka mid noqoshada xukuumadda ama laga qaado awoodda kalsooni siinta iyo kala noqoshada xukuumadda oo loo xil saaro Aqalka Sare.
Previous articleTOOS u daawo: SSC Napoli vs Spartak Moscow, Zoria vs AS Roma, Legia Warsaw vs Leicester City – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article“Itoobiya waxaa ku dhufatay abaar aan ku mitaali kari middii Somalia ka dhacday 2011-kii!” – Madaxa QM